Ụlọ ọrụ na-akpụzi chocolate, igwe na-akpụzi chocolate - igwe LST
Igwe na-akpụzi chocolate bụ igwe ọgbara ọhụrụ zuru oke maka ịkpụ chocolate.Ha nwere ike ịmepụta ọtụtụ ụdị candies chocolate dị elu dị iche iche.Machines gụnyere chọkọleti nkwụnye ego igwe, chocolate mgbawa / dobe nkwụnye ego igwe, chocolate oyi pịa shei igwe, chocolate oghere spinning igwe na multi-functional ịgwakọta na akpụ igwe,
Kedu ihe bụ igwe na-akpụzi chocolate?
1: zuru akpaka chocolate nkwụnye ego akara: ebu ibu & kpo oku igwe-otu-isere / 3D
nkwụnye ego-Mould igwe na-ama jijiji-Vertical jụrụ ọwara-Auto demoulding igwe-Mould na-eweghachi ebu(nhọrọ) -akpụ akpụ.
2:Automatic Oat-Meal Chocolate Production Line: igwe na-agbaze chocolate-na-egweri chọkọletị na-agwakọta chocolate na ngwaahịa crispy (dị ka oatmeal, osikapa crisp, nuts) -akpụ (mpịakọta akpụ) -ebufe - jụrụ oyi-demoulding-nkwakọ ngwaahịa.
3:Chocolate Cold-Press Shell Machine: Onye isi akuko a na-emeso ya
4: Chocolate Hollow Spinning Machine: Emebere akụrụngwa a dabere na ụkpụrụ na chocolate na-aga na ike centrifugal mgbe ọ nọ na mgbanwe mgbanwe na ọnọdụ ntụgharị, dị ka njirimara ya si dị.
Kedu ihe eji akpụzi chocolate?
Obere Shot Chocolate Despositor: eji maka obere na ọkara mmepụta, ụlọ nyocha na ebe a na-amụ ihe, na-emepụta dị ka chọkọletị, ngwakọta mkpụrụ, ndochi etiti wdg (80-100kg / h)
1D dị mfe nkwụnye ego, 2D One-Shot Depositor, 3D Depositor Depositor: eji maka ụlọ ahịa, obere ụlọ ọrụ mmepụta ihe, laabu, chọkọletị ogbako ejiri aka mee, e wezụga otu-shot deposition fnction, nwekwara ike ịrụ 3D ịchọ mma ọrụ.
zuru akpaka chocolate ịkpụzi ahịrị / jikọtara chocolate depositing ahịrị: eji maka chocolate factory, nwere ike na-emepụta dị ọcha siri ike chocolate, etiti jupụtara chocolate, abụọ-acha chocolate urughuru agwakọta chocolate, amber, agate chocolate na na (500-600kg / h), nwere ike hazie ebuli ebuli, dọpụta onye nkwụnye ego, remote debugging, otu isi ọkara akpaka, otu isi, isi abụọ ma ọ bụ atọ isi ịkpụzi ahịrị maka dị iche iche ngwaahịa.
Igwe eji akpụ akpụ chocolate + akpaaka: Tinye bisikiiti akpaaka / nri irighiri, igwe na-etinye mkpisi, nwere ike imepụta ụdị nri chọkọletị dị iche iche.
Igwe ịkpụzi ndị ọzọ:
1: Chocolate mgbawa / dobe igwe nkwụnye ego: eji maka ụlọ ọrụ chocolate, mepụta ibe chọkọletị na obere ọdịdị ma ọ bụ bọtịnụ.
2:Automatic Oat-Meal Chocolate Production Line: eji maka ịgwakọta chocolate, nut butter, mkpụrụ osisi, ma ọ bụ ọka ọṅụṅụ na ndị ọzọ urughuru nri;Ogbe achịcha ngwaahịa dị iche iche ma nwee ike ịhazi ya
3: Chocolate Cold-Press Shell Machine: akpaaka mee shei na ngwa ngwa dị jụụ.
4: Chocolate Hollow Spinning Machine: Ngwa chọkọleti oghere 3D
Ahịrị ime/ịkpụzi chocolate akpaaka zuru oke
Biscuit chocolate ime akara
Ahịrị nkwụnye ego chocolate jikọtara ọnụ